အလှူရှင်မရှိလို့ နေ့စဉ် ပဲပြုတ်နဲ့ စားနေရတဲ့ ပရဟိတမိဘမဲ့​ကျောင်းလေး - 9style
Home/ကြားသိရသမှ/အလှူရှင်မရှိလို့ နေ့စဉ် ပဲပြုတ်နဲ့ စားနေရတဲ့ ပရဟိတမိဘမဲ့​ကျောင်းလေး
Thi Ha July 5, 2019
34,675 Less thanaminute
“အလှုရှင် ​မရှ်ိ​တော့လည်း ပဲပြုတ်​နဲပဲ.​နေ့စဉ်​………. စိတ်​မ​ကောင်းပါဘူးသားတို့သမီးတို့​ရေ…… 😔😔😔 သွားလှူခွင့်​ကြုံပါရ​စေ မိတ်​​ဆွေတို့လည်း ပါဝင်​ ကုသိုလ်​ ယူနိုင်​ကြပါ​စေ….YGW ပရဟိတမိဘမဲ့​ကျောင်း မိုးညိုမြို့
( ပဲခူးတိုင်း နောက်ခြမ်း မင်းလှမြို့ အ​နောက်ဘက် မိုင်၂၀အကွာ)” ဆိုပြီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမကောင်းလို့ ခုလို တစ်ဆင့် ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၄င်း YGW ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းကတော့းမိုးညိုမြို့( ပဲခူးတိုင်း နောက်ခြမ်း မင်းလှမြို့ အ​နောက်ဘက် မိုင်၂၀အကွာ) လို့ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပြီး လှူဒါန်းလိုပါက ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားတာတွေ့ ရလို့ အများပြည်သူပိုမိုသိရအောင် ထပ်ဆင့် တင်ပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
အလှူရှင်များအနေနဲ့ အခုလို လိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှာ လှူဒါန်းရခြင်းက ပိုမြတ်ကြောင်း သိထားကြပြီးဖြစ်လို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။အလှူရှင်များ အမြန်ရောက်ပါစေ… အစစအရာရာ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေနော်။ဤ Post ကို ဖတ်မိသူတိုင်းလဲ ရှဲပေးသွားကြပါအုံးနော်။
ဆက်သွယ်ရန် – ဆရာ​တော်​ဖုန်းပါ ☎☎🙏🙏 Ph…09423700599…..09259472435… Source : ဘိုဘို
“အလှုရှငျ မရှိတော့လညျး ပဲပွုတျနဲပဲ.နစေ့ဉျ………. စိတျမကောငျးပါဘူးသားတို့သမီးတို့ရေ…… 😔😔😔 သှားလှူခှငျ့ကွုံပါရစေ မိတျဆှတေို့လညျး ပါဝငျ ကုသိုလျ ယူနိုငျကွပါစေ….YGW ပရဟိတမိဘမဲ့ကြောငျး မိုးညိုမွို့
( ပဲခူးတိုငျး နောကျခွမျး မငျးလှမွို့ အနောကျဘကျ မိုငျ၂၀အကှာ)” ဆိုပွီး ဖဘေု့တျပျေါမှာ တှလေို့ကျရတော့ စိတျထဲမကောငျးလို့ ခုလို တဈဆငျ့ ပွနျလညျမြှဝဖေျောပွလိုကျပါတယျ။
၎င်းငျး YGW ပရဟိတမိဘမဲ့ကြောငျးကတော့းမိုးညိုမွို့( ပဲခူးတိုငျး နောကျခွမျး မငျးလှမွို့ အနောကျဘကျ မိုငျ၂၀အကှာ) လို့ ဖျောပွထားတာ တှရေ့ပွီး လှူဒါနျးလိုပါက ဆကျသှယျနိုငျမယျ့ ဆရာတျောကွီးရဲ့ ဖုနျးနံပါတျကိုလညျး ဖျောပွပေးထားတာတှေ့ ရလို့ အမြားပွညျသူပိုမိုသိရအောငျ ထပျဆငျ့ တငျပွပေးလိုကျရခွငျးဖွဈပါတယျနျော။
အလှူရှငျမြားအနနေဲ့ အခုလို လိုအပျနတေဲ့ နရောမှာ လှူဒါနျးရခွငျးက ပိုမွတျကွောငျး သိထားကွပွီးဖွဈလို့ တငျပွလိုကျရပါတယျ။အလှူရှငျမြား အမွနျရောကျပါစေ… အစစအရာရာ အားလုံး အဆငျပွကွေပါစနေျော။ဤ Post ကို ဖတျမိသူတိုငျးလဲ ရှဲပေးသှားကွပါအုံးနျော။
ဆကျသှယျရနျ – ဆရာတျောဖုနျးပါ ☎☎🙏🙏 Ph…09423700599…..09259472435… Source : ဘိုဘို
ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ နေကြတ်ပါမည်
ကမ္ဘာက​တောင်​ သတိပြုမိပြီး လာရောက်လှူဒါန်းတဲ့ မြန်​မာပြည်​က ​စေတနာဆရာဝန်​ကြီး